ग्रीन भेन्चर्सको आइपिओ आवेदनको म्याद थप, फागुन २३ गतेसम्म आवेदन सकिने
काठमाडौँ, १६ फागुन । ग्रीन भेन्चर्स लिमिटेडले यही फागुन २ गतेदेखि आयोजनाबाट पीडित स्थानीय बासिन्दाका लागि खुला गरेको साधारण शेयरको बिक्री खुला अवधि थप गरेको छ । अब आयोजनाबाट पीडित बासिन्दाले यही फा...
एमसीसी : ऊर्जा र यातायातको विकासमा कोसेढुङ्गा
काठमाडौँ १६ फागुन । अमेरिकी सहयोग निकाय मिलेनियम च्यालेञ्ज कर्पोरेशन (एमसीसी) लामो बहसपछि अन्ततः प्रतिनिधिसभाबाट अनुमोदन भएको छ । संसदमा दर्ता भएको करिब अढाई वर्षपछि आइतबारको बैठकबाट यो व्याख...
काठमाडौँ, १५ फागुन । सरकारी स्वामित्वका सार्वजनिक संस्थानमध्ये सबैभन्दा धेरै नाफा कमाउन सफल नेपाल विद्युत् प्राधिकरण वित्तीय दायित्व बहन गर्नसक्ने उच्च तहको सुरक्षित क्षमता भएको संस्थाका रुपम...
विद्युतीय व्यवसायी व्यवसायी संघको वनभोज कार्यक्रम हुँदै
काठमाण्डौ १३ फागुन । काठमाडौं विद्युतीय व्यवसायी संघले वनभोज कार्यक्रम आयोजना गरेको छ । संघले एक सूचना निकाल्दै फागुन २१ गते शनिवार प्राकृतिक एवं सांस्कृतिक स्थान स्विट्जरल्याण्...
विद्युत् सर्ट भई आगलागी, २० लाखको क्षति
मलङ्गवा, १३ फागुन । सर्लाहीको हरिपुर नगरपालिका–८ ठूलो जगतपुरस्थित एक क्रसर उद्योगमा आगलागी हुँदा रु २० लाख बराबरको क्षति भएको छ । सिटी विनायक एग्रिगेट क्रसर उद्योगमा गए राति विद्युत् सर्ट भई...
एमसिसी परियोजनाः ऊर्जा र यातायात क्षेत्रको विकासका लागि कोसेढुङ्गा
काठमाडौँ, १२ फागुन । अमेरिकी सहयोग मिलेनियम च्यालेञ्ज कर्पोरेशन (एमसिसी)सम्बन्धी सम्झौता कार्यान्वयनमा आएपछि नेपालको ऊर्जा र यातायात क्षेत्रको विकासका लागि कोसेढुङ्गा सावित हुने ठानिएको छ । &nb...
करेन्ट लागेर एक व्यक्तिको मृत्यु
राजविराज, १२ फागुन । सप्तरीको डाक्नेश्वरी नगरपालिका–९ पत्थरगाढामा गए राति करेन्ट लागेर एक व्यक्तिको मृत्यु भएको छ । स्थानीय ४२ वर्षीय महादेव साहको करेन्ट लागेर मृत्...
निर्माण व्यवसायी सङ्घको अध्यक्षमा सर्वसम्मतरूपमा पुनः सुरेशबहादुर चन्द चयन
बैतडी, ११ फागुन । निर्माण व्यवसायी सङ्घ बैतडीको अध्यक्षमा पुनः सुरेशबहादुर चन्द सर्वसम्मतरूपमा चयन भएका छन् । मङ्गलबार सम्पन्न १७औँ साधारणसभा तथा नवौँ जिल्ला अधिवेशनबाट चन्दको अध्यक्षतामा १७...
६ महिनामा विद्युत् प्राधिकरणको नाफा १२ अर्ब, वार्षिक नाफा १५ अर्ब नाघ्ने प्रक्षेपण
काठमाण्डौ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले चालु आर्थिक वर्ष २०७८/७९को पहिलो ६ महिनामा १२ अर्ब १२ करोड रुपैयाँ नाफा कमाएको छ । प्राधिकरणको वित्तीय विवरण (अपरिष्कृत) अनुसार गएको आव २०७७/७८...
विद्युत र सडक पूर्वाधारका लागि यसकारण आवश्यक रहेछ एमसिसी, तपाईं पक्षमा कि विपक्षमा ?
काठमाडौँ । नेपालमा विद्युत् उत्पादन एकपछि अर्को गर्दै वृद्धि भइरहेको छ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको प्रणालीमा हालसम्म दुई हजार १०० मेगावाट बराबर बिजुली जोडिएको छ । निर्माणका क्रममा तीन हजार ५०० मेग...
मल कारखानाः बिजुली कि ग्यास !, स्वदेशमै उत्पादित विद्युत खेर फालेर किन खोजिदै छ अरु विकल्प ?
काठमाडाै माघ । नेपालमा रासायनिक मल कारखाना खोल्न लगानी बोर्डको कार्यालयले गरेको सम्भाव्यता अध्ययनले बिजुली भन्दा ग्यासबाट मल कारखाना खोल्दा सस्तो पर्ने अध्ययनले देखाएको छ । &nb...
काठमाडौं, २५ माघ । राष्ट्र उत्थान लघुवित्त वित्तीय संस्थाले सर्वसाधारणका लागि साधारण शेयर बिक्री खुला गर्ने भएको छ । कम्पनीले प्रतिकित्ता रु एक सय अङ्कित मूल्यमा रु आठ करोड ५० लाख म...
बिजुली मर्मत गर्ने क्रममा विद्युतको पोलबाट खसेर एकको मृत्यु
ताप्लेजुङ, माघ । ताप्लेजुङमा विद्युतको पोलबाट खसेर आज एक कर्मचारीको मृत्यु भएको छ । पोलमा चढेर बिजुली बनाउने क्रममा पोलबाट झरेर नेपाल विद्युत् प्राधिकरण, ताप्लेजुङ वितरण केन्द्रमा कार्यरत एक कर्मचा...
भरतपुर, माघ । भरतपुर महानगरपालिका भित्रका मुख्य सडक तथा चोकमा ‘स्मार्ट सडक बत्ती’ जडान सुरु गरिएको छ । भरतपुर महानगर र नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको राष्ट्रिय सडक बत्ती प्रवद्र...